कोरोनाको लेभल ३ अस्पताल बिपी प्रतिष्ठानमा कसरी हुँदैछ संक्रमितको उपचार?
२०७७ श्रावण १९ सोमबार ०७:२०:०० प्रकाशित
काठमाडौं- सरकारले धरानस्थित बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि लेभल ३ स्तरको अस्पतालका रूपमा घोषणा गरेको छ। जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमित बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भएमा त्यसको उपचार गर्ने जिम्मा लेभल ३ अस्पतालका रूपमा घोषणा गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
शल्यक्रिया गर्नु पर्ने बिरामी, गर्भवतीलगायतका विशेषज्ञ सेवा चाहिने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएमा लेभल ३ अस्पतालमा राखेर उपचार गरिन्छ। प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने लेभल ३ स्तरको यो एक मात्र अस्पताल हो।
सरकारले प्रतिष्ठानलाई लेभल ३ अस्पतालमा राखेपनि हालसम्म त्यस्ता विशेष समस्या भएका कोरोना संक्रमित अस्पतालमा भर्ना भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा निदेश सापकोटाले बताए। ‘सरकारले प्रतिष्ठानलाई लेभल ३ अस्पतालमा राखेको छ। लेभल ३ अस्पताल भनेको विशेषज्ञ सेवा लिन आउने संक्रमितलाई सेवा दिने अस्पताल हो। तर अहिलेसम्म त्यस्ता संक्रमित भर्ना भएका छैनन्,’ प्रवक्ता डा सापकोटाले भने।
प्रतिष्ठानमा जेठ ८ गते पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भर्ना भएका थिए। हालसम्म प्रतिष्ठानमा ३ सय ५० भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भर्ना भइसकेका छन्। तीमध्ये तीन जनाको भेन्टिलेटरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको डा सापकोटाले जानकारी दिए। प्रतिष्ठानबाट २ सय ८२ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। ३९ जना उपचाररत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको डा सापकोटाले बताए।
संक्रमितको उपचारको लागि लेभल १, २ र ३ गरी देशभर विभिन्न अस्पताल छुट्याएको छ। मन्त्रालयले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरुलाई पूर्वाधारका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै आएको छ।
कसरी हुँदैछ उपचार?
प्रतिष्ठानले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमै १०० बेडको आइसोलेसन छुट्याएको छ। जसमा १० बेडको आसियू रहेको छ भने ८ बेड भेन्टिलेटरजडित छन्। आवश्यक परेमा त्यसलाई बढाउन मिल्ने डा सापकोटाको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानले संक्रमितको उपचारमा खटिने डाक्टरसहितको व्यवस्थापनका लागि उपकुलपतिको संयोजकत्वमा र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएकाले धेरै कुरा व्यवस्थित भएको उनले जनाए। टिमले नै कसरी उपचार गर्ने? कसले स्वाब संकलन गर्ने, कसले क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिको जिम्मवारी कसले लिने भनेर छुटाछुटै टिम बनाएर काम खटाएकोले काम सहज भएको उनको भनाइ छ।
‘सुरुदेखि नै र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमले रोगको बारेमा जानकारी गराउनुको साथसाथै संक्रमित अस्पतालमा भर्ना हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरालगायतका विषयमा तालिम दिएको थियो,’ उनले भने, 'पहिलेदेखि नै तयारी गरिएकाले संक्रमित भर्ना हुँदा उपचार गर्न कुनै कठिनाई भोग्नु परेन।'
र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमले नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी पिपिई लागाउने, फुकाल्ने तालिम दिइरहेको छ।
प्रतिष्ठानले प्रदेश १ का साथसाथै प्रदेश २ को सिराहा, सप्तरी सर्लाही जिल्लाका कोरोना संक्रमित उपचार गर्दै आएको छ। सुरुवाती चरणमा विश्वभर नै पिपिई, सेनिटाइजर, माक्सको अभाव भएको भएपनि प्रतिष्ठानले पिपिई, सेनिटाइजर, माक्स, भिटिएम किटको अभाव हुन नदिएको उनको दाबी छ। डा सापकोटाका अनुसार अहिले सम्म प्रतिष्ठानका कुनैपनि कर्मचारीहरु संक्रमित भएका छैनन्।
'२ हप्ता काम गरिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। पिपिआर नेगेटिभ आइसकेपछि बिदा बस्नुहुन्छ। पुनः अर्को टिम सेवामा खटिन्छ,’ स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनबारे उनले भने।
प्रतिष्ठानले लक्षण भएका/नभएका संक्रमितलाई छुटाछुटै राखेर उपचार गरिरहेको छ। लक्षण नभएका भन्दा लक्षण देखिएका संक्रमित बढी जोखिममा हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। लक्षण देखिएका संक्रमितलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै २४सै घण्टा निगरानीमा राख्ने गरिएको र लक्षण नभएकालाई भने आवश्यकताको आधारमा उपचार गर्दै आएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
लक्षण नभएका संक्रमितलाई बुझाउन नसक्दा आफूहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ। संक्रमितहरुलाई निःशुल्क खानाका साथै खाजाको पनि व्यवस्था प्रतिष्ठानले नै गरिरहेको छ।
अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले १५ हजारभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ। जसमध्ये ३ सय ५५ जना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ।